क्रूरतावादी डिजाइन के हो?: मुख्य सुविधाहरू र कार्यहरू | अनलाइन क्रिएटिभहरू
क्रूरतावादी डिजाइन के हो?
नेरिया मोर्सिलो | | ग्राफिक डिजाइन, सामान्य
त्यहाँ डिजाइनहरू छन् जुन तिनीहरूको अमूर्त मनोविज्ञानद्वारा मापन गरिन्छ, त्यहाँ अरूहरू छन् जुन ग्राफिक तत्वहरूको राम्रो संरचना र वितरणद्वारा मापन गरिन्छ। अर्कोतर्फ, दृश्यमा देखाइएको असंतुलनका कारण धेरै बूम हुने प्रवृत्ति अरूहरू पनि छन्।
दशकौंको लागि, डिजाइन सबैभन्दा आलोचना कलात्मक प्रवृत्ति मध्ये एक भएको छ। यस घटनाले धेरै डिजाइनरहरूलाई ग्राह्यताको लागि नेतृत्व गरेको छ एक पूर्ण डिजाइन वा पूर्ण विरोधी डिजाइन। यस पोष्टमा हामी तपाइँलाई थाहा नभएको अन्य धाराहरू मध्ये एक के हो र त्यो आकार, रंग र अभिव्यक्तिले भरिएको छ जुन सबैले बुझ्दैनन् भनेर देखाउँछौं।
हामीले सुरु गर्यौं।
1 Brutalist डिजाइन: यो के हो?
1.1 मुख्य विशेषताहरू
2 क्रूरवादी डिजाइन: उत्पत्ति
2.1 बर्ष पछि
3 डिजिटल युगमा क्रूरवादी डिजाइन
3.1 क्रूरता: हाल
4 क्रूरता र ग्राफिक डिजाइन
5 डिजाइनर वा कलाकारहरू
5.1 थोमस डन्थोनी
5.2 अर्न्स्ट केलर
5.3 अधिकतम बिल
Brutalist डिजाइन: यो के हो?
क्रूरवादी डिजाइन वा पनि भनिन्छ क्रूरता, एक प्रकारको सौन्दर्य आन्दोलनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र यसले निश्चित प्रकार्यहरू समावेश गर्दछ र अपेक्षाहरू पूरा गर्दछ, त्यसैले नाम र पनि उपयोगितावादी रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
तपाइँले यो केहि विचित्र वर्तमानलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि, यसको मुख्य उद्देश्य डिजाइनको विरोधी सजावटी दृष्टिकोण प्राप्त गर्नु हो र डिजाइनहरू निर्माण गर्न प्रयोग हुने कच्चा मालको पक्षमा आफूलाई उजागर र प्रकट गर्नु हो। र पक्कै पनि तपाईं आश्चर्य गर्नुहुनेछ कि कुन शैलीमा उहाँ धेरै प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो, किनभने यो निश्चित रूपमा 1950 देखि 1970 को दशक को वास्तुकला मा थियो। थोरैलाई के थाहा छैन भने यो अब यसको भित्री भागबाट पुन: उत्पन्न भएको छ र आधुनिक डिजिटल डिजाइन क्षेत्रमा भाइरल भएको छ।
र आज किन यसलाई यति धेरै महत्त्व दिइयो? ठीक छ, किनभने यो एक धारा हो जसले यसको दर्शकहरूको ध्यान सबैभन्दा धेरै नेत्रहीन रूपमा आकर्षित गरेको छ। यसले आफूलाई बाँकी र त्यो भन्दा फरक पार्न सक्षम हुन के आवश्यक छ भनेर उजागर गर्दछ यसलाई चिसो र कडा शैली बनाउँछ।
क्रूरताका विशेषताहरू सामान्यतया दृश्य हुन्छन्, यो तथ्यले यसलाई फरक शैली र आत्मसात गर्न गाह्रो बनाउँछ। अरूको विपरीत, कलात्मक धाराहरू तिनीहरूको पूर्ववर्ती अनुसार भइरहेको छ। क्रूरतामा तिनीहरू एक माध्यमबाट अर्को माध्यमबाट गुज्रिरहेका छन्। हामी सुरु गरौं:
सामग्रीको प्रदर्शनी: यसको आफ्नै शैली छ, जुन वास्तुकला हो, र यसको अनलाइन मिडियासँग कुनै सम्बन्ध छैन।
तिनीहरू मोनोक्रोमेटिक टोनहरू प्रयोग गर्छन् जुन खैरो, सेतो र कालोबाट प्राप्त हुन्छ।
यसलाई कार्यात्मक र अपूर्ण वा नग्न शैलीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ किनकि डिजाइन र कलात्मक र सुन्दर यसको मापदण्डहरूमा फिट हुँदैन।
मोड्युलर तत्वहरू र तिनीहरूको पुनरावृत्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
टुक्राहरू सामान्यतया रेक्टिलाइनर किनाराहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। थप रूपमा, यी टुक्राहरू सम्पादन वा हेरफेर गरिएको छैन।
क्रूरवादी डिजाइन: उत्पत्ति
अहिलेको इतिहास यति विचित्र छ भनौं विनाशको माध्यमबाट सुरु हुन्छ, तिनीहरूका लागि हामी 1940 मा छौं र यसको साथ, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य। यस अवधिमा, बेलायतका धेरै भवनहरू झूटो र पूर्ण रूपमा ढलेका र भग्नावशेषहरूमा देखिन्छन्।
सामान्यतया देशले स्मारकीय प्रकोपको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ, तर यो सकेसम्म चाँडो गर्नुपर्दछ किनकि उनीहरूले आफ्ना छिमेकीहरू र सरकारी भवनहरूको लागि आवास उपलब्ध गराउन आवश्यक छ जहाँ उनीहरूले पूर्ण रूपमा विनाश भएको देशलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन्। कच्चा पदार्थको अभावमा पनि जोडिएको छ ।
अर्को ठाउँमा हामी सोभियत संघ फेला पार्छौं, एक देश जुन पूर्ण मोडेलिङ र भवन निर्माणमा छ। यसको लागी, ख्रुश्च्योभका भनिने पूर्वनिर्मित घरहरूको शैली निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ, केही घरहरू कम लागत सामग्रीहरू र अन्य अघिल्लो मोडेलहरू जस्तै बनाइएका छन्। यो वास्तु शैलीले पूँजीपति वर्ग र विलासिताबाट टाढा सर्ने र कम्युनिष्ट सामाजिक समानता झल्काउने लक्ष्य राखेको छ।
यो शैली फेरि युनाइटेड किंगडममा फैलियो, हन्स्टान्टन स्कूल जस्ता भवनहरू सिर्जना गर्दै, वेस्टमिन्स्टर शहरको स्मिथसन स्क्वायर, बालफ्रन टावर र नेशनल थिएटर। र बाँकी विश्वमा पनि इलिनोइस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको पूर्व छात्र मेमोरियल हल, अष्ट्रेलियाको पर्थ कन्सर्ट हल, टोरन्टोको रोबर्ट्स पुस्तकालय।
यसरी यो आन्दोलनको जन्म भयो ।
यस नयाँ शैलीको ठूलो लोकप्रियताले अधिनायकवादी शासन सहित ठूलो परिणामहरू ल्यायो। अर्थात्, ठूला मोनोक्रोम क्यानभासहरू जस्ता सामग्री र स्रोतहरूको प्रयोगले यो वर्तमानलाई रंगहीन र प्रभावकारी प्रवाह बनायो।
यो आन्दोलनको अन्त्य सन् १९७० को दशकमा भयो।तर आज यसले विश्वभरि छरिएका महान चासोका ऐतिहासिक स्मारकहरू छोडेको छ।
डिजिटल युगमा क्रूरवादी डिजाइन
स्रोत: डिजाइन शेक
आर्किटेक्चरल डिजाइनमा क्रूरता डिजाइनको अन्त्य भएको धेरै वर्ष पछि, एक नयाँ पक्ष वा माध्यम पेश गरिएको थियो, डिजिटल युग। विकास र प्राविधिक विकास संग, यो वर्तमान डिजिटल इन्टरफेस मा उपस्थित थियो.
हाल, यो आन्दोलन, डिजिटल युगमा पेश गरिएको, सबै भौतिक वा कच्चा सामग्रीबाट टाढा सरेको छ र प्रामाणिकता र धेरै कुशल निर्माणबाट उत्पन्न हुने जरा कायम राखेको छ।
वेब डिजाइनमा क्रूरता सधैं कार्यात्मक भएको छ। सबैभन्दा पुनरावर्ती वेबसाइटहरू मध्ये एक प्रसिद्ध Craigslist हो। के धेरै डिजाइनरहरूलाई थाहा छैन कि तिनीहरूले सरल र उपयोगी स्रोतहरू प्रयोग गरेपछि, तिनीहरूले आफ्नो परियोजना र कामहरूमा यो शैली फोकस गर्दै छन्।
वास्तु शैलीको तुलनामा विशेषताहरू टाइपोग्राफीमा धेरै स्पष्ट गरिएको छ र विभिन्न रंग विकल्पहरूमा। अघिल्लो भन्दा फरक, तिनीहरू अब एकरंगी छैनन्।
आज, क्रूरता यसको वास्तुकला जराहरूमा फर्किएको छ। डिजिटल युगमा, बनावट र रङहरू लुकाइएको खाली स्क्रिनको कल्पना गर्न सम्भव छ। सबै सम्पादन हटाइएको छ र डिजिटल फन्ट र वर्ग फुटेज प्रदर्शित छन्।
क्रूरता र ग्राफिक डिजाइन
ग्राफिक डिजाइनमा क्रूरता यसको पूर्ववर्तीका लागि उपस्थित थियो, स्विस शैली वा अन्तर्राष्ट्रिय शैलीको रूपमा पनि चिनिन्छ। ५० को दशकमा निकै प्रख्यात शैली। यो शैली यसको डिजाइनमा वस्तुनिष्ठता र तर्कवादका लागि परिचित छ। त्यसकारण, तिनीहरू थप कार्यात्मक पक्षहरूमा पुगे र कलात्मकबाट टाढा गए।
यसैले टाइपोग्राफिक कन्ट्रास्ट र क्रमबद्ध रेखाहरूलाई धेरै महत्त्व दिइयो, साथै, यसको प्रयोग सरल र गोल ज्यामितीय आकारहरू, बोल्ड टाइपफेसहरू, हाफटोन स्क्रिनहरू, ठाउँहरूको फोटोग्राफी र वास्तुकलाबाट सामग्रीको बनावट।
डिजाइनर वा कलाकारहरू
स्रोत: थमस डन्थोनी
उहाँ एक ग्राफिक डिजाइनर र चित्रकार हुनुहुन्छ फ्रान्समा जन्मे तर लन्डनमा आधारित। ह्यान्डसम फ्यूचर अवार्ड जित्दादेखि, उनले आफू सबैभन्दा आशाजनक र प्रतिभाशाली चित्रकारहरू मध्ये एक हो भनेर प्रमाणित गर्न आएका छन्। यसका ग्राहकहरू सबैभन्दा शक्तिशाली छन्: M&C Saatchi, Microsoft, Nokia र Little White Lies। यो क्रूरतावादी डिजाइन शैलीको अंश हो र यसको ज्यामितीय आकारहरूको कारणले स्विस शैलीको जरा कायम राख्छ।
उसको कामले प्राय: प्रकाशको चलाखीपूर्ण प्रयोगद्वारा विस्तारित कथा समावेश गर्दछ जसले छविहरूलाई कथा बताउन र दर्शकलाई सोच्न अनुमति दिन्छ।
अर्नस्ट केलरको जन्म सन् १८९१ मा स्विजरल्याण्डको आराउमा भएको थियो। उनले कला र साहित्यको अध्ययन गरे र डिजाइनरको रूपमा आफ्नो क्यारियरको क्रममा उनले Kunstgewerbemuseum को लागि पोस्टरहरू सिर्जना गरे। जुरिच, विभिन्न परोपकारी संस्थाहरू र असंख्य हेराल्डिक लोगोहरूको लागि।
डिजाइनरको रूपमा उनको काम वास्तुकलामा टाइपोग्राफी र ग्राफिक डिजाइनमा पनि उच्च मूल्यवान छ। तर, यदि अर्नस्ट केलर कुनै कुराको लागि आधारभूत हो भने, यो शिक्षकको रूपमा उनको काम र धेरै विद्यार्थीहरूमा रहेको अविश्वसनीय प्रभावको कारण हो।
1918 मा, केलरले ज्यूरिखको प्रसिद्ध Kunstgewerbeschule (स्कूल अफ एप्लाइड आर्ट्स) मा डिजाइन र टाइपोग्राफी सिकाउन थाले। त्यहाँ उनले 1956 मा आफ्नो सेवानिवृत्ति सम्म जारी राखे, दशकौं पछि 50 को दशकमा स्विस शैलीको विकास गर्ने युवा डिजाइनरहरूलाई सिकाए। अर्न्स्ट केलरलाई स्विस शैलीको पिता मानिन्छ, जसलाई पछि अन्तर्राष्ट्रिय टाइपोग्राफिक शैली भनिन्छ।
यो केलरका विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्याको कारणले गर्दा हो जसले पछि यो डिजाइन शैलीलाई आकार र लोकप्रिय बनायो। डिजाइन प्रशिक्षणमा नवीन शिक्षण सिद्धान्तहरूको विकासमा अर्न्स्ट केलरको योगदानले मौलिक भूमिका खेल्छ। वास्तवमा, उहाँ संसारमा ग्राफिक डिजाइनको लागि पहिलो व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू मध्ये एकको निर्माता हुनुहुन्थ्यो।
1918 र 1956 बीचको उनको धेरै वर्षको शिक्षणको परिणाम धेरै फरक डिजाइनरहरू थिए। तिनीहरूमध्ये नयाँ ग्राफिक डिजाइनका नायकहरू जस्तै रिचर्ड पॉल ल्होसे, जोसेफ मुलर-ब्रोकम्यान र कार्लो भिभेरेली वा कलात्मक चित्रणका विभिन्न प्रतिभाहरू जस्तै हेरी स्टेनर, लोरा ल्याम वा के. डोमेनिक गेइसबुहलर, र हर्मन वा इडेन जस्ता नवीन डिजाइनरहरू छन्। जेरार्ड मिडिङ्गर।
उहाँ हाम्रो समयको सबैभन्दा पूर्ण र बहुमुखी कलाकारहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ। विश्वव्यापी प्रतिभाको रूपमा मान्यता प्राप्त, उहाँले अन्य चीजहरू बीच वास्तुकार, चित्रकार, मूर्तिकार, डिजाइनर, शिक्षक र राजनीतिज्ञको रूपमा काम गर्नुभयो। आफ्नो जीवनभरि सबै अनुशासनहरू एकजुट भएका छन्, कला र अन्य गतिविधिहरू बीच कुनै स्पष्ट विभाजन थिएन, सबै कुरा एउटै विश्वव्यापी विचारको अंश थियो।
उहाँ 1908 मा विन्टरथरमा जन्मनुभएको थियो, ज्यूरिख नजिकैको श्रमिक-वर्गको शहर, जहाँ उहाँ क्राफ्ट स्कूलमा सुनको काम पढ्न जानुहुन्थ्यो। 1927 मा बाउहाउसमा आफ्नो अध्ययन सुरु गर्नु अघि, जहाँ भासिली कान्डिन्स्की, पल क्ली, जोसेफ अल्बर्स, लास्ज्लो मोहोली-नागी र वाल्टर ग्रोपियसका क्यालिबरका व्यक्तिहरू पढाउँदै थिए। बिल डेसाउमा दुई वर्ष बस्ने थियो, जसको अवधिमा उनले विद्यालयका शिक्षाहरू आत्मसात गरे, र आफ्नो कामको सामान्य रेखाहरू परिभाषित गरे।
यदि तपाईं यहाँसम्म आउनुभएको छ भने, म आशा गर्दछु कि तपाईंले यो सारांशबाट सिक्नुभएको छ जुन हामीले तपाईंलाई देखाएको छ। र तपाईं वास्तुकला वा डिजिटल युगको बारेमा थप के हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » क्रूरतावादी डिजाइन के हो?
गोथिक अक्षरहरू कसरी बनाउने
कसरी छिटो र सजिलै Word मा छवि देखि पृष्ठभूमि हटाउने